XILDHIBAANO DALBADAY IN LA QABTO KULAMADA GOLAHA SHACABKA. – Kalfadhi
MUQDISHO, 9 JAN 2019 (KALFADHI) –Waxaa maalintii 10aad hakat ku jira Kulamada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya kuwaas oo hal fadhi yeeshay tan iyo markii la xaliyay Khilaafkii u dhaxeeyay hogaanka Dowladda. Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka oo la hadlay Kalfadhi ayaa nasiib darro ku tilmaamay qabsoomid la’aanta kulamada Baarlamaanka.
Xubnahaan ayaa dalbaday in si deg deg ah loo qabto fadhiyada Golaha Shacabka maadaama uu soo dhaw xiligii fasaxa Baarlamaanka waxayna Guddoonka ay ka dalbadeyn iney xilka iska saaraan fadhiyada Golaha Shacabka.
Xildhibaan Maxamed Xasan Idiris oo la hadlay Kalfadhi ayaa sheegay in uusan ogeyn sababta loo hakiyay kulamadii Golaha Shacabka oo markii horaba uu sameeyay Khilaafka Guddoonka Baarlamaanka soo kala dhax-galay. Xildhibaan Maxamed Xasan ayaa dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan loo furo fadhiyada Golaha Shacabka maadaama ay horyaalaan shaqooyin badan.
“ma aqaan sababta loo qaban la’yahay fadhiyadii Golaha Shacabka, waxaan ka yaabanahay waxa hortaagan shaqada Baarlamaanka”, ayuu yiri Xildhibaan Idiris.
“Waxaan maqlay in sabtida la furi doono kulanka Baarlamaanka, maalintaasna la soo xeri doono laakiin ma hubo waa warar ay ila wadaageyn Xildhibaanada kale”, ayuu markale u sheegay Kalfadhi.
Xildhibaan Faarax Cabdi Xasan oo sidoo kale ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in labadii Kalfadhi ee ugu dambeysay buuq iyo xasilooni darro siyaasadeed ay uga dhamaadeyn Baarlamaanka Soomaaliya balse ay weli heestaan waqti fiican ayna shaqadooda sii wadan karaan hadii uusan dhib kale imaanin.
“Baarlamaanka markasta waa shaqeeyaa waxa uu leeyahay guddiyo, kulanka weynna waa furmi doonaa”, ayuu yiri Xildhibaan Faarax.
“Xeerarka iyo Hindise-Sharciyeedyada waxay u baahan yihiin in waqti la geliyo, waa wax laga yaabo in lagu sii dhaqmo sanado badan, sidaas dareed ayaa loo ansixin karin mid kasta maadaama uu saameynaayo mustaqbalka umad dhan oo Soomaaliyeed”, yuu markale u sheegay Kalfadhi.
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan sheegay in ay Baarlamaanka Soomaaliya ag yaalaan 29 Hindise Sharciyeed oo ay qaarna horyaalaan Golaha Shacabka, qaarna Golaha Aqalka Sare. 2-dii sano ee ay dowladdiisa jirtay ayuu sheegay inuu saxiixay 2 Hindise Sharciyeed oo kaliya waxa uuna Baarlamaanka Soomaaliya ka dalbaday iney dedejiyaan Ansixinta Sharciyada horyaala oo qaarkood muhiim u ah shaqada hada socota sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya.
Xildhibaan walaac ka muujiyay joojinta tababarka xisbiga Wadajir